Degso CCleaner loogu talagalay Windows
Bilaash Degso loogu talagalay Windows (34.50 MB)
CCleaner waa nidaam ku guuleystey nidaamka hagaajinta iyo amniga oo sameyn kara nadiifinta kombuyuutarka, dardargelinta kumbuyuutarka, ka saarista barnaamijka, tirtirka feylka, nadiifinta diiwaanka, tirtirka joogtada ah iyo kuwa kaloo badan.
Dadka isticmaala Windows PC waxaa la siiyaa laba nooc, CCleaner Free (Bilaash) iyo CCleaner Professional (Pro). Nooca Xirfadleyda CCleaner, oo u baahan fure, waxaa ka mid ah astaamo ay ka mid yihiin baaritaanka caafimaadka PC, cusbooneysiinta barnaamijka, dardargelinta PC, ilaalinta asturnaanta, kormeerka waqtiga-dhabta ah, nadiifinta jadwalka, cusbooneysiinta otomaatiga ah iyo taageerada. Waxaad isku dayi kartaa nooca CCleaner Pro bilaash 30 maalmood. CCleaner Nooca Bilaashka ah, dhanka kale, wuxuu si dhakhso leh u bixiyaa astaamaha kombiyuutarka iyo asturnaanta oo waa bilaash nolosha.
Sidee loo rakibaa CCleaner?
CCleaner wuxuu soo jiitaa dareenka nidaamka lacag laaanta ah iyo barnaamijka hagaajinta ee loo sameeyay dadka isticmaala ee doonaya inay ku isticmaalaan kombuyuutarkooda waxqabadka maalinta koowaad. Intaa waxaa dheer, dadka isticmaala Windows waxay u isticmaalaan barnaamijkan loo yaqaan CCleaner qalab nadiifinta kombiyuutarka.
Iyada oo la kaashanayo CCleaner, waxaad nidaamkaaga ka dhigi kartaa mid aad u deggan oo waxqabad sare leh adigoo tirtiraya faylasha aan loo baahnayn ee kombiyuutarkaaga ama dayactirka khaladaadka ku jira diiwaanka. CCleaner, oo ah mid kamid ah barnaamijyada loogu jecelyahay adduunka nadaafada nidaamka, waxaa kujira aaladaha aasaasiga ah ee aasaasiga u ah xawaaraha kumbuyuutarka.
CCleaner, oo leh interface isticmaale aad u cad oo fudud, ayaa loo diyaariyey inay adeegsadaan kombuyuutarrada isticmaala heerarka oo dhan. Barnaamijka, oo leh menu-yada Nadiifiyaha, Diiwaangelinta, Qalabka iyo Nidaamyada meertada, waxaad si fudud ugu fulin kartaa dhammaan howlaha aad rabto adigoo adeegsanaya tabka aad rabto inaad isticmaasho.
Sidee loo isticmaalaa CCleaner?
Qaybta CCleaner, guud ahaan, waxay goaamisaa waxyaabaha ku jira kombuyuutarkaaga kaa qaadaya meel bannaan oo aan loo baahnayn oo adiga kugu habboon, waxay ku nadiifinaysaa kombuyuutarkaaga hal guji oo keliya waxayna kuu oggolaaneysaa inaad abuurto meel bannaan oo dheeri ah. Sidan oo kale, ma aha oo kaliya inaad heshid meel bannaan oo dheeri ah, laakiin sidoo kale waxaad kordhisaa waxqabadka kombuyuutarkaaga.
Barnaamijka, khaladaadka ku hoos jira diiwaanka kombiyuutarkaaga oo yareeya waxqabadka nidaamkaaga ayaa lagu baarayaa qaybta diiwaangelinta. Khaladaadka faylka DLL, dhibaatooyinka ActiveX iyo Class, fidinta feylka aan la isticmaalin, rakibayaasha, caawinta feylasha iyo waxyaabaha la midka ah ee soo muuqan doona ka dib marka skaanka lagu nadiifiyo hal guji, oo kuu ogolaanaya inaad kombiyuutarkaaga ku isticmaasho waxqabad aad u sareeya.
Ugu dambeyntii, hoosta qaybta qalabka; Iyada oo gacan ka heleysa qalab kala duwan sida ku dar / ka saar barnaamijyada, barnaamijyada bilowga, faylka raadiyaha, soo celinta nidaamka iyo wadista nadiifinta, waxaad kordhin kartaa xawaaraha boot-ka ee nidaamkaaga, ka saar kombuyuutarka kombiyuutarrada aan loo baahnayn ama aan la adeegsan, iyo nidaamyada dib u soo celinta nidaamka xakamaynta.
Mid ka mid ah waxyaabaha lagu daro CCleaner ee adeegsadayaasha Turkiga shaki laaan waa taageerada luqadda Turkiga. Sidan oo kale, waxaad si fudud u dhammaystiri kartaa dhammaan hawlgallada aad rabto inaad ku qabato iyadoo la kaashanayo barnaamijka waxaadna si fudud ula socon kartaa waxa aad sameyneyso tallaabo kasta.
Gabagabadii, hadaad rabto inaad xawaareyso kumbuyuutarkaaga oo aad marwalba isticmaasho kumbuyuutarkaaga waxqabadkiisa maalinta ugu horeysa, barnaamijkani waa sida saxda ah ee aad ubaahantahay.
Isticmaal bilaash ah oo aan xadidnayn.
Ahaanshaha qalab nadaafadeed oo nidaam nadiif ah oo lagu kalsoonaan karo sanado badan.
Si joogto ah u wanaajiyey awoodda iskaanka.
Laaanta taageerada nadaafadda ee barnaamijyada badanaa la isticmaalo.
Cabirka Faylka: 34.50 MB